I-25 I-Tatchoos I-Ideal I-Ideal Design Idea Kwabesilisa Nabasetyhini - Tattoos Art Ideas
I-25 Best Anchor Tattoos Design Idea Kwabesilisa Nabasetyhini
sonitattoo Julayi 8, 2016
Tattoos zeAnchor kuthetha enye into elula; uzinzo. Ukuzinza kunokubonakaliswa kwiimeko ezahlukeneyo. Kukho iinkalo ezininzi zobomi onokuzinza kwaye enye indlela yokuziqhenya ngokuzibonakalisa ngokukhenkcela nge tattoo. Ukusetyenziswa kwe tattoo ye-# isetyenziswe ngabantu abaninzi ukuba bathethe amabali angabonakaliyo malunga nento abaye badlula ngayo kwezinye izigaba zobomi babo.
I-tattoo ye-Ancho imele ifanekisela amandla kunye nokuzinza. Ngaba ubonile umboniso we-anchor ngaphambili? Le # tatto yaqalwa iminyaka emininzi edlulileyo ngabaseSumer. I tattoo iye yaba enye yeempawu zokudala zehlabathi kwaye yayisetyenziswa ngamaKristu okuqala. Oku kwakukho xa betshutshiswa ngenxa yeenkolelo zabo. Iquka inkonzo ye-maritime kwi-arhente yokuthungela ulwandle njenge-navy, amandla, ukhuseleko kunye nokhuseleko,
I-tattoo yesikebhe yayisetyenziselwa ukuxelela amabali amaninzi. Yayisetyenziselwa ukufuzisela umnqamlezo kwaye yayithetha ngoYesu Kristu kunye neentlungu zakhe esiphambanweni. Kwakhona wathetha ngamagunya omfazi kunye namabhinqa apho umntu angayisebenzisa. Namhlanje, ikhonkco inokudibaniswa nezinye izinto ukunika enye intsingiselo. Iimpawu ze-Anchor zisetyenziselwa ubuhlobo obutsha, kuba bubonakalisa amandla okuhlala ngethuba ngexesha leengxaki. Njengoko akukho ncalela enkulu malunga namathambo kwi-21ste leminyaka, itekisi ye-anchor ibonakala kakhulu kuluntu oluqhelekileyo ngenxa yentsingiselo yalo kunye nokufanekiselwa kwayo. Kukho nelo xesha ibali le-tattoo e-anchor e-inkini emzimbeni. Nguye kuphela onxibayo onokukwazi ukuxelela loo mabali kwabanye.
1. I-tattoo ye-tattoo yokukhenkcela ingcamango yeenyawo zentombazana
Kule mihla, tattoo sele ibe yindlela ebonakalayo yokuba sibona abantu abaninzi beza kubamba itekisi njengale. Kukho iintlobo ezimbini zeengxube zomzimba; isigxina kunye noyilo lwexeshana. Okukhethiweyo kukuba wenze isigqibo.
2. Nika ingubo ye-tattoo Ink inkcazo yabesifazane
I tattoo engapheliyo iyancipha ngokuguga kodwa ingenakuphuma emzimbeni ngaphandle kokuguqulwa okukhulu.
3. Ingcamango ye-tattoo imibono kunye nomyalezo, Musa ukuziyeka udibanise
Unyango lwama-Laser lungasetyenziswa kodwa intlungu enxulumene nenkqubo ibaluleke kakhulu.
4. Isandla esinqabileyo sesandla sokubamba umbala we tattoo ingcamango yamantombazana
Esi sizathu sokuba abantu benoyiko lokwenza lolu hlobo lwe tattoo. Iindleko zokwenza oku zibiza kakhulu eziyingozi.
5. Emuva kwesandla se-tattoo design idea kubafana
I tattoo yesikhashana ingasuswa kalula. I-pigment iyinki kwiinkalo zangaphandle zesikhumba ezishiya kuphela i-epidermis enemibala. Kufuneka uqonde ukuba ungalahlekelwa ezinye iibhola zeeseli xa zisuswe.
6. Iintyatyambo ezincinane ezinemibala kunye ne-anchor tattoo ingcinga emthangeni
Ungakhathazeki ngamaseli esikhumba alahlekile ngenxa yokuba aya kukhula emva kwexesha elifutshane. Ukuba ucinga ukufumana le tattoo kodwa ungaqinisekanga ukuba kuya kuba yinto enokufuna ukuyenza ixesha elide, hamba uyilo lwexeshana.
7. Anchor umdwebo we tattoo design amakhwenkwe
Emva kweempembelelo ze tattoo azibonakali zifaniswa ne tattoo esigxina esithatha ixesha lokuphilisa emva kokususwa.
8. I tattoo ukuyila ingcamango ecaleni kwebhola
Kufuneka ukuba ungxamile ukuze Imifanekiso inki ukuba ngaba isigqibo malunga noyilo. Le tattoo iye yenziwa yi artist abanezakhono ababesenza umsebenzi emangalisayo kunye #idea lomsebenzisi.
9. Biceps Ikhonkco lombutho we-tattoo ngumbono wokwenza amakhwenkwe
Awuyi kuva intlungu xa kuyilwe yesikhashana. Nangona kunjalo, kulabo bafuna ukufumana tattoo eya kuhlala ngonaphakade, kufuneka ulungele ukunyamezela intlungu ngexesha lokususwa kwalo.
10. Iimbala ezincinane ezinemibala kunye ne-anchor tattoo ingcamango yesandla
Khumbula ukulahlekelwa yigazi xa kuvela kwi-#design yexesha elifutshane ngokungafani nokuqulunqwa kwe tattoo ngokusisigxina.
11. isibini ukubeka iingcamango zomnatha ngesandla
Ngaba wake wakha wazibuza indlela le tattoo enhle yafika ngayo?
12. Ngamahlombe sleeve i-tattoo ingcamango yabasetyhini
Ixesha elangena kulo, ingqalelo enikeziwe kunye neendleko zizinto zezinto onokuzicingisisa xa usenza tattoo. Unomdlalo omnandi xa unemifanekiso emangalisayo enje. Cinga ngako.
13. Ikhonkco elincinci nelincinci Umbono wokubumba umdwebo wamantombazana e-ankle
14. I tattoo yomdabu ngesandla
Unokubona itekisi ye-anchor ene-ribbons isasazeka kuyo yonke igama ngegama elithi 'Intsapho' ebhaliweyo kuyo. Ngamanye amaxesha, unokufumana ubaba okanye umama kubo. La magama abonisa iintetho malunga namandla kunye nobophelelo kubo. Unokuba ulwalamano oluye lwabethelela ilitye ngokuphindaphindiweyo kodwa luze luze luze luze lwenze. Oko okufunayo ukufumana itekisi ye-anchor. umthombo wesithombe
15. Iimbali ezintle ezinemibala kunye ne-anchor tattoo design idea
16. I-bracetic anchor tattoo design idea for girls
Into yokuqala okufuneka uyenze ngaphambi kokufumana itekisi ye-anchor kukuphanda okufutshane malunga nohlobo lwe-anchor oluya kuhambelana nawe. Kukho indawo ezininzi apho ezi tatto zihlala khona emzimbeni womntu. Ubukhulu be tattoo buxhomekeke kwindawo ofuna ukuba ibekwe kuyo. Nokuba icala leminwe lingaba yindawo epheleleyo yokushiya tattoo yakho. umthombo wesithombe
17. Umleqi maphupha kunye ne-anchor tattoo ingcamango yamantombazana ekhanda
Ikhonkco inokuthiwa kukuba amandla angabamba nayiphi na iinqanawa apho abaloli bafuna ukuba kungabikho. umthombo wesithombe
18. I-colorful anchor tattoo design ink inkcazo yabesifazane
Namhlanje, abantu bafumana ama-tattoos ama-anchor abatsho ukuba banokuma xa yonke into ibonakala ihlukana. umthombo wesithombe
19. Ncinane isibini i-tattoo ingcinga
Ukusetyenziswa kwamathambo e-anchor kunokuthi kubekho ukubophelela okuza kubakho ubudlelwane bomda ndawonye; isikhumbuzo sezinto ezilungileyo eziza kwenzeka kunye nobudlelwane obusondeleyo phakathi kwamalungu entsapho. umthombo wesithombe
20. Icala lomzimba we-tattoo ingcamango yamantombazana
Ukuba ungumntu we-tatvy, ukusetyenziswa kweettoti ezinamanqaku kunokuhamba ixesha elide kukunika loo nkcazo oyifunayo kakhulu. umthombo wesithombe
21. Inyoni kunye ne-anchor tattoo design ink inkcazo yamantombazana ngeenyawo
Ufuna njani ukwenza isitatimende se tattoo? Kukho indawo efana ne-ankle, intamo kunye nentamo apho ungasebenzisa itekisi. umthombo wesithombe
22. intliziyo kunye ne-anchor tattoo design idea kwingalo
Ungakwazi ukudibanisa tattoo kunye neentyantyambo, amagama, izakhiwo kunye nezinye iimolo. Ngalunye uhlobo loyilo oluza kunye ne-tattoo anchor luthandekayo. umthombo wesithombe
23. Iintaka ezindizayo eziphethe i-anchor design tattoo ingcinga kubafazi abasemva
AmaTattoos abe ngenye yezinto eziphambili zefashoni ezithandwa ngabantu abaninzi kule mihla. Awukwazi ukulahlekelwa ngumkhwa we-tattoo kunoma iyiphi na inxalenye yomzimba wakho. umthombo wesithombe
24. I-tattoo ingcinga ngomyalezo, Ungaze udibanise
Jonga iindidi ezahlukeneyo uze ukhethe okulungileyo kuwe. umthombo wesithombe
25. I-colorful calve i-tattoo design design yebhinqa
Cofa apha ukuze uthole ezinye iiAnchor Tattoo Designs
tattoo engapheliyotattoostattongesandlaowona mhlobo womhloboi-cherry ityatyamboiipattoosi tattooiimpawu zezodiac zempawutattoos ezinyawoi-tattooscute tattoosukutshiza amathambotattoos kumantombazanaicompass tattootatna tattooizifuba zesifubatattooIndlovu yeendlovutattooszinyonitattoossibiniizigulanetattoos zohlangaTattoos zeJometriiifatyambo zeentyatyambotattoo yedayimanizengalo zengalobathanda i tattoosiifotto zentamoutywala tattootatto tattoosihoi fish tattoodesign mehndiIintyatyambo zeTattooIintliziyo zeTattoostattoostattoo yamehloizithunywa zezuluzomculo tattoostattooI-Ankle Tattoostattoos zelangaiifoto eziphakamileyotattoos kubantutattoos zenyangangombonotatto flower floweriidoti